संघीयताको सबलताको सर्त- विचार - कान्तिपुर समाचार
संघीयताको सबलताको सर्त
साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।
पुस २६, २०७८ खिमलाल देवकोटा
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।
एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक, परम्परागत राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षता, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट राज्यशक्तिको अधिकारसहितका तीन तहका शासन व्यवस्था एवं राज्यका सबै तह र तप्कामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु संविधानका सुखद पक्ष हुन् । संघीयता संविधानको मेरुदण्ड हो । संघीयता र संविधानबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संघीयता नेपालका लागि बिलकुल नयाँ अनुभव पनि हो, जसका कारण काम गर्ने तौरतरिकामा केही त्रुटिसमेत छन् ।
नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची संविधानमै लिपिबद्ध छ । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकार सञ्चालित भए पनि अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमा लगायतमा थुप्रै समस्या छन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका माध्यमबाट नागरिकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा लिए पनि त्यसबमोजिम काम हुन सकेको छैन । कानुन तर्जुमाको गति सुस्त छ । कानुन तर्जुमा गर्ने संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । विडम्बना, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । संसद् चल्न नदिने/नचलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ जसका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको छ, जुन कानुनी र विधिको शासनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाउन मद्दत गर्छन् । नागरिकको निराशाको ग्राफ पनि बढ्छ ।
सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको आशय भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति छ । संघीय सरकारका सबै अंग र निकायमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता नै हावी छ । स्थानीय तहका अधिकारहरूसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यसैगरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा पनि कार्यालयहरू खडा गरिरहेको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो पटक सत्ता जोडघटाउका कारण प्रदेशमा अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकिरहेका छैनन् । भागबन्डाको संस्कृतिले गर्दा राज्यका अंगहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीका आधारमा विकेन्द्रीकृत र राजस्वका आधारमा केन्द्रीकृत छ । वित्तीय संघीयताको भावना अनुसार कार्यजिम्मेवारी र राजस्वबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्यमा खासै तत्परता देखिँदैन । कर्मचारी पदपूर्ति लगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् तर संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यक्षमतामा परेको छ । कार्यजिम्मेवारीका आधारमा आवश्यक कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । एक चौथाइभन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् । दुर्गमका स्थानीय तहले सीधै लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सरुवामा पनि संघीय सरकारले आँखा लगाएर त्यहाँका नागरिकप्रति घात गरेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ठेक्कापट्टामा संलग्न हुँदा अनियमितता मौलाएको छ । सवारीसाधनको दुरुपयोग त सामान्यजस्तै भएको छ ।
संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । तर मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धमा अहिले नकारात्मक समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यबोझका आधारमा प्रदेशमा संस्थागत संरचनाहरू (मन्त्रालय/मन्त्री, कर्मचारी, कार्यालय, कानुन आदि) कति आवश्यक पर्ने हुन्, लेखाजोखा जरुरी छ । संघीय र स्थानीयस्तरका संस्थागत संरचनाहरूको पनि समीक्षा जरुरी छ । सहकारिता मोडलको संघीयता भएका कारण संस्थागत संरचना निर्माणमा लाभ–लागत र सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिए/नदिएको पक्षको विश्लेषण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रदेशमा रहने मन्त्रीका सम्बन्धमा अन्य देशको अनुभव हेर्ने हो भने स्विट्जरल्यान्डमा प्रदेश (क्यान्टोन) मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या अधिकतम ७ मात्र हुने व्यवस्था संविधानमै छ । भारतको संविधानको धारा १६४(१ ए) अनुसार प्रदेश (राज्य) का मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन, केन्द्रशासित राजधानी दिल्लीमा त अझ १० प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने व्यवस्था धारा २३९ मा छ । त्यस अनुसार ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा मन्त्रीको संख्या (मुख्यमन्त्रीसहित) ७ मात्र छ, जबकि दिल्लीको जनसंख्या २ करोड छ । भारत, स्विट्जरल्यान्ड लगायतको अनुभवका आधारमा पनि हामीले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या चुस्त, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन १० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन जरुरी छ ।
संघीयताको सफलताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, कानुन निर्माण लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक समस्या र सवालहरू छन् । सरोकार मन्त्रालय र निकायहरूले यिनलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । भारत, अफ्रिका लगायतका संघीय मुलुकमा यस्ता निकायको क्रियाशीलताका लागि स्ट्यान्डिङ कमिटी, वर्किङ कमिटीसहितको सचिवालयको व्यवस्था छ । हामीकहाँ वर्किङ कमिटीको त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद् लगायतका बैठकले गरेका निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । जस्तो, २०७५ मंसिरको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू २०७५ मसान्तसम्म सक्ने लगायतका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुसारका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू अझै कागजमै सीमित छन् । सरकारका तहहरूबीच नीतिगत र कानुनी सामञ्जस्य कायम गराउन संघीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रदेश–प्रदेशका कानुनहरू एकआपसमा बाझिएका छन् । यस विषयमा स्थानीय तह त झन् लथालिङ्ग छ ।
वित्तीय संघीयता, कानुन तर्जुमा, कर्मचारी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा पनि थुप्रै सवाल छन् । जस्तो— वित्तीय संघीयताकै सम्बन्धमा सरकारका तहहरूबीच कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट भए पनि कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाको सम्बोधन किन हुन सकेन ? नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य आयोग तथा निकायहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा समाधानका प्रयासहरू किन हुन सकिरहेका छैनन् ? प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था भए पनि ससर्त र विशेष अनुदानलाई किन आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखियो ? प्रदेश र स्थानीय तहबीच ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको संकलन र बाँडफाँटमा पहिलो वर्षदेखि नै देखिएका समस्याको समाधान अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? प्रदेशको वित्तीय स्रोतका दायराहरू फराकिलो पार्ने प्रयास किन हुन सकेन ? बिनाकारण तथा औचित्य ससर्त अनुदानका नाममा हजार–लाख रुपैयाँका ससाना दर्जनौं कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा किन पठाइए ? नयाँ सोच र जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारको गलत कामको देखासिकी किन गरिरहेका छन् ? स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) ले स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको स्थितिमा प्रदेशसँग समन्वय गरी (प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम छ) यसको पूर्ण खारेजी किन गरिँदैन ? यी सवालहरूमा केन्द्रित रहेर जबसम्म घनीभूत छलफल हुँदैन, तबसम्म सरकारका तहहरूबीच समस्या रहिरहन्छ; शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।
कानुन तर्जुमा र कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रका सवालहरूमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू किन बनेनन् ? संघीय कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित हुने गरी किन तर्जुमा भइरहेका छन् ? मूल ऐनको भावनाविपरीत र अधिकारबिनै जथाभावी प्रत्यायोजित विधायनहरू (कार्यविधि, निर्देशिका आदि) किन बनिरहेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ? साबिक कैयौं गाविसलाई वडा बनाइयो तर जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने वडासचिवको व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? अधिकार र जिम्मेवारीका आधारमा दरबन्दीको सिर्जना हुनुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा केन्द्रमा बढी दरबन्दीको सिर्जना किन गरियो/गरिँदै छ ? कार्यजिम्मेवारीका आधारमा संस्थागत संरचना (कर्मचारीसहित) ले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन किन हुन सकिरहेको छैन ? मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, प्रहरी आदि कार्यालय तथा निकायहरूको सेवाप्रवाहमा किन परिवर्तन आएन ? सरकारी कार्यालयहरूमा बिनासोर्सफोर्स अहिले पनि किन जनताको काम हुन सकिरहेको छैन ? सतहमा देखिएका यस्ता सवाल र समस्याहरूको समाधानमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने यस शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकका गुनासा रहँदैनन्, परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ, विकासले फड्को मार्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ।
साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले समयमै तीनै तहका सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याई मुलुकलाई सही दिशातिर डोर्‍याउन आवश्यक छ । तर तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय जरुरी छ, एक्लै दौडेर कोही पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।
संघीयताको सबलीकरणबारे सतहमा देखिएका समस्या र सवालहरूको सम्बोधनमा सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षणका लागि हामीले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं । सरकारका कामकारबाहीबारे थाहा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार संसद्प्रति जवाफदेह र उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा समेत छ । सरकारले सतहमा देखिएका सवालहरूको जवाफ संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दिनुपर्छ ।
संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकारले कुनै पनि संरचना नराख्ने १ भएका संरचनाहरू हस्तान्तरण गर्ने; राष्ट्रियस्तरका नीति, नियम, मापदण्ड निर्माण र ठूलठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने; प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्रोत र साधन जुटाउन सहयोग र समन्वय गर्ने; अन्तरतह समन्वय, सहकार्य र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेजस्ता काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । खास–खास ठूला परियोजनाबाहेक विकाससम्बद्ध सबै खालका जिम्मेवारीहरू प्रदेशले सम्हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, व्यापार–व्यवसाय, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन, वन, वातावरण, प्रदेश शान्ति–सुरक्षा र प्रशासन लगायतका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नमा प्रदेशलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानतः यी जिम्मेवारीहरू प्रदेशकै हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । संविधानमा उल्लिखित यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि पनि संकल्प प्रस्ताव जरुरी छ ।
कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, सफल प्रशासनिक संघीयता, कानुन तर्जुमामा क्रियाशीलता र सेवाप्रवाहमा तदारुकता मात्रै हुने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । यी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका अंगहरू संवेदनशील हुन सके आम नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ, संघीयतासम्बन्धी विरोधाभासहरूको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
पुस २६, २०७८ नीरा भगत थारू
२०७८ साल नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका लागि महाधिवेशनको वर्ष रह्यो । हुन त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भरसक महाधिवेशन गर्नु नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताका छन् तर कानुनी प्रावधान केही समय छले पनि सधैं छल्न नसकिने भएकाले महाधिवेशन गरेको देखाउनु उनीहरूको बाध्यता बन्यो । संवैधानिक हिसाबले नै बाध्यात्मक बनेका महाधिवेशनहरूका विभिन्न चित्र–चरित्र देखिए ।
फगत औपचारिकता : जुनसुकै महाधिवेशन पार्टीविशेषका लागि मात्र नभई लोकतन्त्रकै निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत नेताहरूका भाषणले होइन, पार्टीहरूको विधानसम्मत व्यवहारले बनाउन सक्छ । तर यस वर्षका महाधिवेशनहरू लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन नभई फगत औपचारिकताका लागि गरिए ।
सिद्धान्ततः महाधिवेशन पार्टी विधान र राजनीतिक पार्टीसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । पार्टी विधानबमोजिम योग्यता पुगेका जोकोही महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार हुन र छानिन पाउनुपर्छ । प्रतिनिधि छानिएपछि विधानबमोजिम योग्य जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुने अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ । तर प्रतिनिधि छानिन नै केन्द्रबाट टुप्पी समाएर तानिनुपर्ने, को केन्द्रीय पदाधिकारी र को सदस्य बन्ने भनेर पनि नेताले तोक्नुपर्ने अनि प्रतिनिधिहरूले ताली पिट्नुपर्ने अभ्यासले लोकतन्त्रको खिल्ली उडायो । भाषण चाहिँ लोकतान्त्रिक गर्नुपर्ने तर व्यवहार अधिनायकवादी गर्ने ? यस्तो दूषित र व्यवहारबाट शुद्ध परिणाम आउन सक्दैनथ्यो, आएन ।
परनिर्भरता : महाधिवेशनहरूमा कुनै महिला, जनजाति आदिवासी, दलित, मधेसी, मुसलमान, थारू र खुला क्षेत्रको व्यक्तिले देशभरिबाट छानिएर आएका प्रतिनिधिसँग भोट मागेर जितेको गौरव र हारेको सन्तुष्टि गर्न पाएनन् । नेताको खल्तीमा मेरो नाम अटायो कि अटाएन भन्ने खोजी मात्र भयो । ज–जसका नाम नेताहरूका खल्तीमा अटाए, उनीहरूको मनोकांक्षा पूरा भयो । नेताका खल्तीमा अटाउन नसक्नेहरू अझै राम्रो गरेर अर्कोपल्ट छनोटमा पर्ने अठोटसहित होइन, अझै नेताको नजिक हुने र नेतासँग मजाले चिनिने, नेताले राम्रोसँग चिनेपछि मात्र
आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुन्दर बन्ने यथार्थ बुझेर घरघर फर्किए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचित सूची नै खल्तीबाट निकाले भने नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले चाहिँ जिताउनुपर्ने मान्छेको सूची । त्यस्तो सूची कसैको ठाडो र प्रत्यक्ष थियो, कसैको घुमाउरो र अप्रत्यक्ष थियो । तर सारमा प्रतिनिधिको चाहना रहेकाहरू नभई नेताले रुचाएकाहरू राजनीतिक पगरी पाउन सफल भए । यस अर्थमा महाधिवेशनहरूका परिणाम नेतामा निर्भर रहे ।
जात्रा : पार्टीहरूले जति धेरै जनता महाधिवेशनमा देखाउन सक्यो उति आफू ठूलो पार्टी भएको र राजनीतिक शक्ति आफूमा केन्द्रित रहेको, जनता आफ्नो पक्षमा रहेको र आगामी चुनावमा पनि आफू सरकारमा जाने पक्का भएको सन्देश दिन अस्वाभाविक भीड जम्मा गराउन खोजेको देखियो । त्यही भीडमा कसैले व्यापार चलाए, तर कसैको विचारको तरंग आएन, भीडले नयाँपन दिएन, भीडले राजनीतिक सिद्धान्त बनाएन, भीडले देशका लागि नीतिगत धारणा पारित गरेन । भीडले अस्तव्यस्तता, असुरक्षा र अभाव मात्र प्रतिबिम्बित गर्‍यो । कोही आधा बाटोमा अलपत्र परे, कसैले भुइँमा बसेर पातमा खाए त कोही भोकभोकै परे, कोही महाधिवेशनस्थल नै नदेखी फर्किए । आखिर सबैलाई जनताको भीड नै देखाएर ठूलो पार्टी देखिने इच्छा रहेछ त, महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाटकचाहिँ किन गरेको ? प्रतिनिधिको हैरानी नगरी सकेसम्म जनताको ठूलो भीड उतार्ने, भीडका बीचमा नेताले खल्तीबाट नाम निकाल्ने र पढेर सुनाउने अनि पररर्र ताली बजाउने फर्मान जारी गरे हुने रहेछ त १
आय आर्जन : यो वर्षको सुरुदेखि नै मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका महाधिवेशनको चर्चा र प्रक्रिया सुरु भएकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन पायो । कोही ऋण गरेर राजनीतिक जुवाको खालमा बसे होलान् त केहीले थुपारिएकोबाट खर्च गरे होलान्, जे भए पनि सेकुवा र रक्सी पसलको फसल राम्रै फस्टायो । यसको फाइदा कुखुरापालक र किसानसम्मलाई भयो । कोरोनाले थलिएका यातायात व्यवसायीले पनि राहतको अनुभव गरे । होटल, लज पनि राम्ररी चले । कपडा पसल, किराना पसल र सहकारी एवं बैंकहरूलाई पनि फाइदा भयो । मुलुकभर भएको यस्तो गतिविधिबाट हवाई कम्पनीलाई फाइदा नहुने कुरै भएन । यसरी महाधिवेशनहरूले निर्धारित लक्ष्य बोक्न नसके पनि आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिए ।
पहिलो पुस्ताको अन्तिम महाधिवेशन : महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधि नजिकिँदै जाँदा पदमा रहेकाहरू नसुने जस्तो गर्छन्, आकांक्षीहरू हुटहुटी लगाउँछन् । बाध्य नभएसम्म तोकिएकै मितिमा महाधिवेशनको साइत जुर्दैन । हाल ७० वर्ष नाघ्दै र पुग्दै गरेका पहिलो पुस्ताका नेताहरू अर्को महाधिवेशन गर्ने बेलासम्म लौरो टेक्नैपर्ने अवस्थामा पुग्लान् । हिरिक्क भएर फेरि पदलोलुपता देखाएनन् भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका लागि यो अन्तिम महाधिवेशन भयो ।